Olee otú Wụnye Android Lollipop ka Nexus 7, Nexus 5, Nexus 4 na Ọzọ
> Resource> Android> Olee otú Wụnye Android Lollipop on igwe na mbadamba
Google ka a tọhapụrụ Android 5.0 - Lollipop. Na nnyocha e mere na anyị mere na-egosi na ihe karịrị 94% nke ndị mmadụ na-aga iji wụnye Android 5.0 na ha igwe na mbadamba. Ọtụtụ n'ime ha chọrọ iji nwalee Lollipop, mgbe niile, ọ bụ a ohuru OS maka Android ekwentị mkpanaaka na mbadamba. Otú ọ dị, ọ bụghị na mfe imelite Android 5.0 ma ọ bụ wụnye Android 5.0 na gị ntị na mbadamba. Tupu ime nke ahụ, i nwere ihe ụfọdụ ntị ka:
Part 1. Lelee ma gị gam akporo ngwaọrụ na-eze kwere ka wụnye Android 5.0 ma ọ bụ
Part 2. Olee imelite ka Android 5.0 na ukara OTA
Part 3. Olee otú Wụnye Android 5.0 Lollipop ka Nexus Series Iji aka
Part 4. Olee Flash Android 5.0 ROM gị Android ngwaọrụ
Ọ na-ada Ọ bụ nnọọ mgbagwoju anya imelite ka Android Lollipop, nri? Echegbula. Ị nwere ike chepụta ebe ị bụ na ihe ị na-kwesŽrŽ ime site n'ịgụ esonụ nkọwa.
Part 1. Ndepụta nke ngwaọrụ na eze kwadoro nwere ike emelitere-Android 5.0
1. flagship ngwaọrụ site na Google: Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 10 na Google Play mbipụta ngwaọrụ
Developers na a Nexus 5 ma ọ bụ Nexus 7 nwere ohere Android Lollipop ebe June 26. Ma ihe ndị ọzọ nke ọrụ, ozi ọma ahụ bụ na Android Lollipop bụ ugbua maka Nexus 4, Nexus 5, na Nexus 7. ​​Ma OTA ga-abụ maka Nexus 10 obere oge. Ọ bụrụ na ị natara Andoid 5.0 update OTA n'ihi na gị Nexus ngwaọrụ na-achọghị na-echere, ị nwere ike ozugbo download na ụlọ ọrụ mmepụta ihe oyiyi si Google ugbu a.
2. Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Cheta 4, Galaxy Alpha, na Galaxy Cheta 3
Samsung Galaxy S5 ga-akpa ngwaọrụ site Samsung iji nweta update maka Android 5.0. Samsung Galaxy Cheta 4 e wepụtara kwa n'oge ẹkedori na Android Lollipop, ma a ga-update dị ka mma. Ọ bụ kwuru na Galaxy Alfa na Galaxy Cheta 3 ga-update kwa.
3. HTC One (M8) na HTC One (M7)
HTC eze gosikwara na ha ga-amalite inyefe mmelite ka HTC Otu ezinụlọ worldwidely n'ime 90 ụbọchị nke na-anata ikpeazụ software si Google. E wezụga kwuru 2 ngwaọrụ, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na HTC Ọchịchọ Eye, HTC One Obere 2, HTC One Obere na ma eleghị anya HTC One Max ga-update kwa.
4. Moto X Dị Ọcha Edition na nke abụọ-g Moto G
Motorola ka nkwenye a ga-melite n'ihi Moto X Dị Ọcha Edition na nke abụọ-g Moto G. Ọ bụ ka na nhazi ugbu a.
Mbụ ngwaọrụ na-aga na-Android 5.0 update bụ LG G3. Emeputa mara ọkwa na LG3 ọrụ na Poland ga-akpa ibudata Android 5.0 - Lollipop.
6. Sony Xperia Z, Xperia zł, Xperia ZR, Xperia Tablet Z, Xperia Z1, Xperia Z1S, Xperia Z Ultra, Xperia Z1 kọmpat, Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, Xperia Z3, Xperia Z3v, Xperia Z3 kọmpat na Xperia Z3 Tablet kọmpat
Sony ka kwupụtara na ha ga-nyak Android 5.0 update maka Xperia Z usoro.
A ga-enwe Android 5.0 mmelite maka n'elu kwuru banyere ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị bụ na ndepụta ahụ, ihe ị chọrọ ime bụ ka ichere maka ukara OTA. Na o nwere ike na-ewe 1, 2 ma ọ bụ ọnwa 3 maka update abịarute dabere na gị emeputa. My aro n'ihi na ị bụ ichere maka ukara update maka Android 5.0. mgbe ọ bụ dị, ị nwere ike nweta nkwalite ka Android 5.0 mfe. Ọ bụrụ na ị na-esi ọnwụ na wụnye Android 5.0 na ngwaọrụ gị tupu ukara OTA abịa, nanị ụzọ bụ Flash Android 5.0 ROM.
Amasị nwalee Android Lollipop, naanị na-ahụ na gị emeputa adịghị ihe ọ bụla atụmatụ nyak Android 5.0 update OTA maka ngwaọrụ gị? Nanị ụzọ ka ị wụnye Android Lollipop bụ Flash Android 5.0 ROM.
Ọ bụrụ na Android 5.0 abịarute, a ga-ihe OTA ozi na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, na-agwa e nwere ihe update. Right now, Android Lollipop update OTAs dị maka Moto X Dị Ọcha Edition, nke abụọ-g Moto G, Nexus 7 (Wi-Fi na Mobile version), Nexus 9 (Wi-Fi), Nexus 5 (GSM / LTE) na Nexus 10 . Ọ bụrụ na ị ahụwo OTA ozi maka Android 5.0 Lollipop na ngwaọrụ gị, ị pụrụ ịgbaso mfe nzọụkwụ n'okpuru iji wụnye ya.
Nzọụkwụ 1. ndabere ngwaọrụ gị. Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ na-abanye na mgbake mode: jituo Ike na olu bọtịnụ. Chọta ndabere ma ọ bụ Nandroid ngalaba n'ịkwado ndabere.
Nzọụkwụ 2. hụ na gị na Wi-Fi ma ọ bụ cellular data bụ anụ.
Kwụpụ 3.Click na melite ma ọ bụ wụnye button ibudata echichi ngwugwu na ekwentị gị na-eso kpaliri iji wụnye Android 5.0 na ngwaọrụ gị.
Part 3. Olee otú Wụnye Android 5.0 Lollipop ka Nexus ekwentị mkpanaaka na Tablet Iji aka
Ụfọdụ ndị kwuru na ọ bụ ezie na ha Nexus ngwaọrụ bụ na ndepụta na a ga-emelitere-Android Lollipo, ha natara OTA ma. Echegbula! Ọ bụrụ n'ezie na ike na-eche iji wụnye Android Lollipop na gị Nexus ekwentị ma ọ bụ mbadamba, na-agbalị ndị na-esonụ.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Nexus Nkpọrọgwụ Toolkit na kọmputa gị. Ọ na-arụ ọrụ na Windows PC. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, biko gbalịa iji ya na mebere Windows PC. Biko mara na ngwá ọrụ a nwere ike ndum gị akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na you'r nchegbu banyere nke ahụ, i kwesịrị nnọọ na-eche maka ukara OTA kwuru na Part 2.
Nzọụkwụ 2. pịa Ntọala> Gbasara ekwentị na gị Nexus ngwaọrụ. N'okpuru Mee ọnụ ọgụgụ, chọta ngwaọrụ gị ewu ihe ma na-echeta ya.
Nzọụkwụ 3. pịa Ntọala> Gbasara ekwentị> pịa Mee Number aka Mmepụta mode. Na Mmepụta mode nhọrọ, nwee USB debugging. Nanị site eme USB debugging, gị Nexus ngwaọrụ ga-ahụrụ site Nexus Nkpọrọgwụ Toolkit.
Nzọụkwụ 4. Jikọọ gị Nexus ngwaọrụ gị na kọmputa site na ya dijitalụ USB. Ẹkedori Nexus Nkpọrọgwụ Toolkit na họrọ ngwaọrụ ị na-eji na ọ bụ ugbu a Mee. Mgbe ngwá ọrụ na-agba mbọ Jikọọ na ngwaọrụ gị, a ga-a mmapụta na ekwentị gị. Ị kwesịrị ị na-ekwe ka njikọ. Ọ bụrụ na ndị ngwá ọrụ ike na-adịghị aghọta ekwentị gị, ị na-kwesŽrŽ pịa Full Driver Installation Guide na Toolkit iji wụnye software ọkwọ ụgbọala.
Nzọụkwụ 5. Na Nexus Nkpọrọgwụ Toolkit, pịa Unlock button> OK> Ee. N'oge usoro, ngwaọrụ gị ga-reboot.
Nzọụkwụ 6. On gị Nexus ngwaọrụ, pịa Ntọala> Mee nọmba aka Mmepụta Mode na họrọ USB debugging.
Nzọụkwụ 7. Gaa Google offcial saịtị ibudata 5.0 factory oyiyi faịlụ. Biko họrọ nri oyiyi faịlụ ibudata dị ka ngwaọrụ gị nlereanya. Zọpụta image faịlụ na mpaghara gị mbanye.
Nzọụkwụ 8. Nexus Nkpọrọgwụ Toolkit, pịa Flash Stock + Unroot. Na ozugbo họrọ oyiyi faịlụ na ị na ebudatara ke nzọụkwụ 7, idetuo na n'oge gara aga na MD5 checksum ọnụ ọgụgụ nke bụ ọzọ ka onyinyo faịlụ gị ebudatara na Google ukara saịtị.
Nzọụkwụ 9. Chere maka ekwentị gị rebooting. Ọ bụ ya!
N'ihi na ọrụ ndị ga-anaghị enweta Android 5.0 update si emeputa, na-egbu maramara Android 5.0 ROM na ngwaọrụ bụ nanị ụzọ. N'ụzọ dị mwute, 3 variants nke Android 5.0 Lollipop ROMs bụ nanị maka Nexus 5 ugbu a. Ngwaọrụ ọzọ nwe-echere maka ROMs na-abịa. N'okpuru ebe a bụ nkọwa Flash Android 5.0 ROM maka Nexus 5.
Gbaa mbọ hụ na 80% nke Nexus 5 batrị ụgwọ
Ndabere data na ntọala na a ngwá ọrụ, dị ka ClockworkMode ma ọ bụ TWRP.
Jide n'aka na ekwentị gị nwere ike jikọọ na kọmputa gị ọma na ya eriri USB;
Gbaa mbọ hụ na Nexus 5 na-esite na TWRP mgbake arụnyere na na na ya bootloader unlocked. n
N'ihi na nzọụkwụ Flash ihe Android 5.0 ROM na Nexus, biko lelee ndu >>
Mgbọrọgwụ Android 5.0 Lollipop - Ọ bụ Ya mere Easy
Android 5.0 Lollipop Update Nchọpụta nsogbu
Top 6 Video akpọ ngwa ọdịnala n'ihi Samsung Smartphones
Olee otú Play WAV on Android Devices